Global Voices teny Malagasy » Fampivoarana ny Tanàndehibe ao Tsetsenia: Nahoana ny Olona no Mandao ny Vohitr’ireo Razambeny? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Avrily 2017 6:07 GMT 1	 · Mpanoratra OC Media Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Rosia, Ady & Fifandirana, Fampandrosoana, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Sendikà, Tanora, Zavakanto & Kolontsaina
Saripika nalaina avy ao amin'ny visitchechnya.ru ary nampiasaina tao anaty lahatsoratra orizinaly  tao amin'ny tranonkalan'ny OC Media.
Ity manaraka ity dia dika avy amin'ny lahatsoratra mpiaramiasa  nosoratan'i Kazbek Chanturiya  nivoaka voalohany tao amin'ny tranonkala OC Media . 
Tsetsenia, toy ireo repoblika hafa marobe ao anatin'ny Federasiona Rosiana-n'ny vaninandro maoderina, dia niaina fahoriana lalina sy ny fandaozan'ny olona ny toerana ny tany amin'ireo tanàna ambony toerana– indrindra fa ireo tanora — hankany amin'ireo tanàna eny amin'ny tany lemaka. Miray feo ny olona milaza fa ilaozan'izy ireo ny tanànan'ny razambeny mba handeha hitady “fiainana mendrika kokoa”. Matetika anefa ny zavamisy no tsy mifanojo amin'izay nandrasan'ireo mpifindramonina, satria na dia ilay ny tanàna midadasika indrindra ao amin'ilay repoblika aza, Grozny, miaraka amin'ireo tranobeny manaka-danitra manjelanjelatra, dia mazàna no tsy mahavita manome azy ireo ny zavatra tadiaviny.
Nandritry ny fotoana nampangotraka ny ady tao Tsetsenia, azo lazaina ho ny vohitra rehetra tao Tsetsenia no rakotra mponina. Noho ny ezaka fanavotana aina nataon'izy ireo, nandosiran'ny olona ny habibiana sy ny tsimatimanota nisitrahan'ny tafika Rosiana. Ireo tena madi-doha sisa, na ireo izay niezaka ny hiaro ny tranony tsy hiharan'ny halatra sy fandrobàna, no nijanona tao an-tanàna.
Marobe be tamin'ny olona tahaka izany no maty na naratra vokatry ny daroka baomba na famonoana niniana. Betsaka ireo fianakaviana namoy ny andrim-pianakaviany nandritry ny alina.
Noraisin'ireo vohitra manodidina ireo rehetra nandositra ny ady, tao anatin'ny fanahy nentin-drazana mahay mandray vahiny nananàn'ireo ao Kaokazy. Napetraka tany anaty sekoly, ankaninjaza ary tranon'olontsotra ny olona.
Gaga tamin'ny fahalalahan'ny tànan-dry zareo sy ny habetsahan'ny sakafo teny an-databatra ireo olona avy any amin'ireo tanàna manodidina. Avy ao amin'ny toerana fambolena ao an-tanàna daholo ihany ireo sakafo rehetra ireo, isan'izany ny hena, izay ireharehan'ireo mponina ao an-tendrombohitra fa hanin-dry zareo in-telo isanandro.
Niova tanteraka ny toedraharaha
10–15 taona lasa tany ho any, ny ankamaroan'ireo Tsetsenina dia niaina tany aminà vohitra iray, saingy nalaky be ny fikisahana naka ny fiainana an-tanandehibe. Amin'ny ankapobeny, manana velarantany midadasika ireo vohitra, indraindray efa ho antsasaka hektara iray. Io tany famokarana io dia ampy namelomana fianakaviana maro. Fanampin'izay, niompy karazam-biby maro ny olona: akoho, gisa, gana, ondry sy omby. Ireny rehetra ireny no nahatonga ny Tsetsenina hahavita tena, na fahafaharatsiny mba tsy miankina loatra amin'ny fanjakana.
Mbola voatahiry ny asa fambolena any amin'ireo tanàna ambony, izay mitoka-monina tsy mifangaro amin'ny tanàndehibe, saingy any amin'ireo toerana fonenana ao anatin'ny 50 kilaometatra manodidina an'i Grozny, betsaka ireo zaridaina fambolena no efa rakotra bozaka aman'ahitra.
Mamboly ampahan-tany kely ny sasany amin'ireo fianakaviana, roa metatra toradroa eo, volen'izy ireo persily, hanitra ary tongolobe maitso. Lasa tany lavavolo ny ambin'ny tany ary nihena ny isan'ireo biby fiompy nentindrazana karakarain'ireo fianakaviana Tsetsenina. Raha taloha, manana omby roa isan-tokantrano ny Tsetsenina, ahazoany vokatra mandavantaona avy amin'ny ronono , ankehitriny dia vitsy sisa no mahay ny fomba fitery omby vavy. Tonga hatrany amin'ireo vohitra Tsetsenina ny lafy ratsin'ny fampivoarana ny tanàndehibe.
‘Tsy maintsy mifikitra amin'ny fàkany ny olona ’
Ny ankamaroan'ireo olona miaina an-tendrombohitra no miaina eny amin'ny tany lemaka amin'izao fotoana izao. Taorian'ny nampifanarahan'izy ireo ny fiainana ho amin'ny an'ny tanàndehibe, tsy afaka ny haka sary an-tsaina intsony momba ny ho toerany anaty tontolo ambanivohitra ry zareo. Tsy mahafaly ireo efa zokiolona ny toedraharaha. Mino ireo antitra fa ny fanahin'ny firenena no nanjavona. Tsy hita any am-bohitra intsony ny hehin'ny ankizy.
“Rehefa tsy misy olona, dia tanety fotsiny io, toy ny any rehetra any. Ny olona no mameno ny faritany miaraka amin'ny dikany sy ny tanjony. Ratsy ny fironana misy amin'izao fotoana izao. Ilaozan'ny olona ny toerana nahaterahany,” hoy i Vakha Musayev, 70 taona, mponina ao amin'ny vohitra iray any amin'ny Distrikan'i Shatoy tamin'ny OC Media.
Hoy i Musayev, mandao ny vohitr'izy ireo ny tanora miaraka amin'ny fanantenana fa hahita harena sy hanome fanabeazana ho an'ny taranak'izy ireo. Tsy tiany io toejavatra io.
“Tsy maintsy mifikitra amin'ny fakany ny olona. Raha tsy misy an'io, ho lasa olona tsy manana fianakaviambe sy foko niaviana ny taranany, raha very ny fifandraisan'izy ireo amin'ny toerana nahaterahany,” hoy ny senton'ny lahy antitra iray.
Movldi Aybuyev, 52 taona, niaina saika ny fiainany manontolo tany amin'ny iray amin'ireo vohitra Tsetsenina ao amin'ny Distrikan'i Urus-Martan. Valo taona monja no nandiavany ny tokotanin-tsekoly ary niasa niaraka tamin'ny omby izy hatramin'ny fahazazàny. Mahafantatra betsaka momba ny soavaly izy ary mirehareha amin'ny fahaizany mitsambikimbikina. Tamin'ny 2004, nahazo 350.000 robla izy ($6,150) ho tambin'ny faharavàn'ny tranony nandritry ny ady. Nividy fiara izy ary nampanofa efitrano tao Grozny, izay indraindray monja teo amin'ny fiainany tany aloha no mba nitsidihany azy.
Tiany ilay fiainany vaovao ao an-drenivohitra. Rehefa lany vola izy, dia nanomboka niasa toy ny mpamily fiarakaretsaka, na efa nanomboka antitra sy drodroka aza ny fiarany tamin'izany fotoana izany.
Any amin'ny vohitra niaviany, manana tany antsasaka hektara mahavokatra tokoa izy, izay lasa lavavolo daholo. Fony fotoana nampihiratra ny masoandrony, mbola fahavelon'ireo ray aman-dreniny, namokatra ovy sy tongolo nanana amby ampy ilay tany. Ampy tsara ny vola azo avy amin'ny famarotana azy ireny.
Saingy ankehitriny, lazain'i Aybuyev fa asa mafy ny fambolena ary mba te-hanana fahafinaretana izy eo amin'ny fiainany. Tsy ao an-tsainy ny hoe mila andoavany vola ara-bakiteny daholo ny zavatra rehetra ao an-tanàndehibe ao. Izany no fomba itondrany ny fiainany, miandry ny hisy hanakarama.
Amin'ny ampahany dia hadisoan'ny rafitra feno kolikoly no nahatonga ny olona nisafidy ny handao ny vohitr'izy ireo hankany an-tanàndehibe.
Any an-tanàndehibe, afaka misoratra ho toy ny olona manana kilema mandritry ny taona iray ny olona iray, na mandra-pahafatiny mihitsy. Tsolotra 15.000–20.000 robla ($260–$350) dia ampy hiantohanao ny fanànana sata tahaka izany izay afaka miantoka fidirambola marintoerana ho anao. Raha toa ka voasoratra ho olona manana kilema daholo ny mpianakavy, ambony sy ampy tsara ny vola raisina mba tsy hampiasàna vatana intsony indray. Nefa tsy misy ny fandaharanasan'ny fanjakana tahaka izany ho fanampiana ireo mponina any amin'ny faritra an-tendrombohitra.
Tsy ny rehetra no maniry hiaina an-tanandehibe
Mandritra izany fotoana izany, mitahiry fahatsiarovana mamy momba ny lasan'izy ireo tany ambanivohitra tany ny sasany. Tsaroan'ilay fizisiana sady mpitsabo, Liza Asuyeva, ny fotoana niainan'izy sy ny reniny ary ny anadahiny tao am-bohitra ary ny tany niainan'izy ireo dia afaka nanome sakafo nahavelona ny fianakaviana iray manontolo.
“Indray taona, namboly ovy izahay teo aminà ampahan-tany kely mirefy 400 metatra toradroa. Nahazoanay ovy tsara kalitao niisa 21 kitapo izany. Nanana tongolo maitso, tongolobe sy tsaramaso ihany koa izahay. Nanana akoho sy gana. Nahazatra anay ny nivarotra atody tamin'ireo mpiray vodirindrina tsy nanana akoho, saingy maro anaka. Navadik'i Neny ho akaninjaza ihany koa ny efitrano iray ho an'ireo zanaky ny mpifanolo-bodirindrina taminay. Nanambola izahay ary afaka nividy izay tianay. Mazava loatra, henjana ny mamadika bainga. Nahazatra an'i Neny ny nifoha maraina be mba hanaisotra ireo soherim-bibikely (bibim-bomanga sy ovy) mipetaka eny amin'ny felambonin'ny ovy. Tsy mba nampiasa fanafody velively izy,” hoy i Asuyeva milaza ny fahazazàny feno hafaliana.
Arakaraky ny fitombon'ny fikisahan'ny avy any ambanivohitra ho any an-drenivohitra, misy ihany koa ny fikisahana mifanohitra amin'izay zotra izay. Ireo mpandraharaha manambola sy ireo manampahefana ao amin'ny governemanta dia mihevitra fa manandaza kokoa ny fanorenana lapa goavana any amin'ny vohitry ny razamben'izy ireo, mba ho fitsiditsidika tsindraindray sy hikarakaràn-dry zareo ankitonotono miaraka aminà vahiny marobe nasainy any an-tampon-tendrombohitra mijoalajoala any. Mitsongoloka mitazana avy eo an-davarangany ry zareo mitazana ireo trano foana sy ireo tany rakotra olona fahiny, saingy lasa tany lavavolo ankehitriny, izay nilaozan'ny tompony hitady fiainana tsaratsara kokoa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/04/23/98313/
 lahatsoratra orizinaly: http://oc-media.org/urbanisation-in-chechnya-why-do-people-leave-their-ancestral-villages/